Fanomanana ny fifidianana : Miroso amin’ny atrikasa fampianarana mifidy ny Ceni -
AccueilSongandinaFanomanana ny fifidianana : Miroso amin’ny atrikasa fampianarana mifidy ny Ceni
Fanomanana ny fifidianana : Miroso amin’ny atrikasa fampianarana mifidy ny Ceni
Mihazakazaka ny fotoana. Noho izay indrindra, dia efa miroso amin’ny fikarakarana atrikasa amin’ireo renivohi-paritany lehibe eto Madagasikara amin’ny fanentanana sy fampianarana mifidy ny eo anivon’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny Ceni, amin’izao fotoana izao.
Araka izany, dia natomboka omaly ary haharitra hateloana ny atrikasa eo amin’izany fanentanana sy fampianarana mifidy izany ka ny teto Antananarivo no nanombohan’ny Ceni sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy amin’ny fanomanana sy fikarakarana ny fifidianana, toa ny Basket-fund amin’ny alalan’ny Vondrona Eoropeanina, ny USAID, Norvezy, Alemana, Frantsa, Soisa ary Aostralia sy Korea Atsimo. Eo ihany koa ny Pnud amin’ny fanatanterahana ireo atrikasa miisa enina, izay tafiditra indrindra amin’ny tetikasa Sacem (Soutien au Cycle Eléctorale à Madagascar).
Anisan’ny ifotoran’ny atrikasa ny fampiofanana ireo olona eo anivon’ny Ceni misahana ny fanabeazana mpifidy sy ireo mpanentana avy amin’ny fiarahamonim-pirenena izay misahana ny fanentanana.
Voalaza fa singa iray fanampiny amin’ny dingana fanomanana ny fifidianana ireo atrikasa fanentanana sy fampianarana mifidy. Hoentina hanamafisana ny dingana faharoa eo amin’ny fanentanana sy fampahafantarana izay tanterahin’ny fiarahamonim-pirenena amin’ireo distrika miisa 119 manerana ny Nosy.
Tanjona amin’izany, raha ny nambaran’ny filohan’ny Ceni, Hery Rakotomanana, dia hanamafisana ny fandraisan’anjaran’ny mpifidy amin’ireo fifidianana rehetra eto amin’ny firenena. Eo ihany koa ny fampidirana sy fampahafantarana azy ireo eo amin’ny tontolon’ny fandriam-pahalemana sy ny demokrasia, sns.